Igwe okpukpu ọkụ eletrik China Manufacturer
Nkọwa:Mmiri Na-adịghị Eke Ọkụ Na-adịghị Eju,Ndị na-eto eto na-eto eto na-eto eto,Ngwakọta Germination na-ekpo ọkụ
Home > Ngwaahịa > Nkịtị Nkịtị Na-emepụta Ihe > Ihe eji emepụta ihe eji emepụta ihe > Igwe okpukpu ọkụ eletrik
Ihe Nlereanya.: XHC-F037-6
Igwe ọkụ na-emepụta eletrik na-eme site na PTC ihe nkiri ọkụ. PTC ihe kpo oku na-ekpo ọkụ bụ ihe igwe ọkụ kpo ọkụ nke na-ejikwa ike oriri na-akpaghị aka site na ịchịkwa nkwụsi ike maka onwe ya n'enweghị thermostat mgbe okpomọkụ nke okpomọkụ ahụ dị iche.
Igwe ọkụ ọkụ na-agbanye ọkụ bụ ihe nkwụnye dị mfe ma gaa mpaghara nke na-eme ka ọ dịrị mfe. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-arụpụta ọbụna okpomọkụ, na-ebuli ala okpomọkụ na mgbọrọgwụ site na ihe ruru. 5 - 10 ° C n'elu okpomọkụ okpomọkụ na ezigbo maka mmelite mmapụta germination. Nke a pụtara na enwere ike ị nweta nsonaazụ dị mma ọbụna na ebe ndị na-ekpo nkụ.
Ọ dịkwa mma maka ịgbatị cuttings ma ọ bụ nye aka na-emetụ aka na ọnọdụ okpomọkụ na-etolite n'oge oyi na ntakịrị nke okpomọkụ na mgbọrọgwụ ha. Iji chekwaa ike ọ bara uru ịtọ mpempe akwụkwọ polystyrene ma ọ bụ yiri nke a na-etinye akwa mbadamba ọkụ. Enwere ike iji unit nwere thermostat kama ọ bara uru dịka ngwọta dị ala dị ala.
Akụrụngwa ngwa ngwa ọkụ ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Ejiri Azụ na-eji Ngwongwo Na-ekpo ọkụ na EC Kpọtụrụ ugbu a
Egwú dị nro Micro Luxe okpomọkụ mat Kpọtụrụ ugbu a
Obere ihe ọkụkụ maka ihe ndị na-akpụ akpụ Kpọtụrụ ugbu a
Ezigbo mma nchekwa Mgbochi Nkịtị Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri Na-adịghị Eke Ọkụ Na-adịghị Eju Ndị na-eto eto na-eto eto na-eto eto Ngwakọta Germination na-ekpo ọkụ Mmiri Na-ekpo Ekpu Ọkụ Na-eme Ka Iche Mmiri Na-agbaze Mmiri Ọkụ Mmiri Na-ekpo ọkụ Mkpụrụ Na-agba Ọkụ Ndị Pet Mmiri ahụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke snow Mmiri dị ọkụ nke oyi na-achịkwa site na APP